सबै उद्यमीमा हुदो रहेछ – यी ७ विशेष गुण – HamroKatha
सबै उद्यमीमा हुदो रहेछ – यी ७ विशेष गुण
हाम्रो कथा २०७६ साउन ३० गते १७:२०
तस्वीर : monster.com बाट
हुन त व्यक्तिको दक्षता, क्षमता, गुण र स्वभावले उसको सफलतालै प्रभाव पर्छ होला I तर यदी तपाईले संसारका सफल व्यक्तिहरुलाई एकै ठाउँमा जम्मा पर्नु भयो र उनीहरुको आधारभूत चरित्र निकाल्नु भयो भने त्यस्तो आधारभूत चरित्रहरु यस्तो हुन आउँदो रहेछ I
१) जोखिम मोल्ने क्षमता
हामीले अनुभव गरेकै कुरा हो, संसार उसैकोे पोल्टामा हुन्छ जसले जोखिम मोल्न सक्छ । नेपालका एक मात्र डलर अरबपति विनोद चौधरीदेखि अफ्रिकाका अरबपछि अलिको डाङगोटेसम्म । नेपालकै सफल उद्यमी चन्द्र ढकालदेखि भाटभटेनी सुपर मार्केटका संचालक मिनवहादर गुरुगंसम्म । जसले केही गरेर देखाएका छन् तिनले जोखिम मोलेका छन् नै । तर, सफल उद्यमीहरु भन्छन् जोखिम मोल्दा हिम्मत साथ मोल्नुपर्छ । निरन्तरता दिन सक्छु भन्ने विश्वास साथ जोखिम मोल्नु पर्छ । सुखमा मात्तिने र दुखमा आत्तिने गरेर रिस्क लियो भने त्यो मुर्खता बाहेक केहि हुन्न ।
२) समय भन्दा अगाडिको सोच
धेरै जसो हामी समयसँगै हिड्न खोज्छौं, तर जसले समयलाई हिँडाउन खोज्छ, उहि सफल हुन्छ । विल गेट्स यदि समयसँगै चल्थे भने आज दुनियाँ विन्डोज सेवेन मै अड्केको हुन्थ्यो होला । तर उनले समयलाई चलाए ।
त्यस्तै यदि एप्पल पनि समयसँग चल्थ्यो भने सायद हामी भखर आइफोन ५ या ६ तिरै हुन्थ्यौं, तर एप्पलले पनि समयलाई चलायो, आज परिणाम हाम्रै अगाडि छ । माग यति छ, म यति उत्पादन गर्छु भनेर हिड्नु भयो भने, त्यो तपाईले अरुलाई व्यवसाय गर्न स्पेस दिए जस्तो हो । जति स्पेस छ, त्यतिमा राज गर्नुस्, जति स्पेस बनाउन सकिन्छ, त्यतिलाई आफ्नो ब्राण्ड बनाउनुस् ।
पाइला यति चलाखी साथ चाल्नुस् कि, यात्रा लामो रहेछ भने पनि नथाकियोस् । झट् मगनी पट् विवाह भने जस्तो कहाँ सजिलो हुन्छ र व्यवसाय गर्न । यहाँ त आँधि हुरीलाई खप्न सक्ने, खसेका पहिरोलाई ठेल्न सक्ने, अनि गडेका काँडालाई उखेल्न सक्ने गरिको निरन्तरता चाहिन्छ । व्यवसायी शेखर गोल्छा भन्छन् नि, वुवाको देहान्त भएको दोश्रो दिनमै कार्यलय पुगें भनेर । यहि प्यास र यहि लगन अनि यहि निरन्तरता नै सफलताको सुत्र हो ।
४) धार भन्दा फरक पाइला
खोला सँगै बग्छु भन्नेले प्यास त मेटाउला तर उसको परिचय पनि सँगसँगै मेटिइरहन्छ । नाम उसैको बन्छ, जसले नयाँ धारमा बग्ने प्रयत्न गर्छ । आफैं सोच्नुस् त एकपटक, यदि फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकर्वगले कलेजमा यस्ता वेवसाइट खोल्नुहुँदैन भनेर चुप लागेका भए के उनको नाम बन्थ्यो त ? वारेन वफेटले सारा संसार शेयर बेच्न लागेको बेला उनले पनि शेयर नकिनेर बेच्न नै उद्दत भएको भए के उनको आज परिचय यति फराकिलो हुन्थ्यो त ? विनोद चौधरीले फरक सपना नदेखेको भए आज वाईवाई ग्लोवल बन्ने थिए त ?
५) स्वस्थ जीवनशैली
भनिन्छ स्वास्थ्य छ त धन छ । उद्यमशिलताको जगमा उभिनु छ भने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनुपनि उत्तिकै जरुरी छ । खानपानमा उचित ख्याल अनि दैनिक केहि मिनेट एक्सरसाइज गर्ने हो भने, त्यसले शारिरिक मात्र होइन, मानसिक रुपमा पनि एउटा उद्यमीलाई बलियो बनाइराख्छ । हरेक दिन नयाँ समस्या अनि नयाँ चुनौतिसँग जुध्नुपर्ने भएकोले एक्सरसाइज निकै जरुरी मानिन्छ, उद्यमीका लागी ।
६) भरपर्दाे साथ
अफ्रिकनहरुको एउटा निकै मर्मस्पर्शी भनाई छ, ‘यदि तिमी छिटो हिँड्न चाहन्छौं भने, एक्लै हिँड तर यदि तिमी टाडा हिँड्न चाहन्छौं भने, भरपर्दाे साथी खोज ।’ हो दर्शकवृन्द, एक्लै हिँड्नु र भरपर्दाे साथसँग हिँड्नुमा आकाश जमिनको फरक छ । किनकी एक्लै हिड्दा न त सोचले विस्तार हुने मौका पाउँछ न त समर्पणले ।
७) सकरात्मक सोच
संभवत संसारमा सवैभन्दा ठूलो शक्ति आशा र सकरात्मक सोच हो । जब आशा सकिन्छ जिन्दगी पनि सकिन्छ । अझ उद्यमीहरु त झन् आशाकै भरमा लगानी गर्छन् । यदि कुनै उद्यमीले भोली राम्रो हुन्छ भन्ने सोचेन भने उसले समय र पैसा दुवै लगानी गर्दैन् । संसारमा छिनछिनमा नयाँ नयाँ प्रोडक्ट आउँछन् । ति प्रोडक्ट लञ्च हुने भनेकै सफल हुन्छु र ब्राण्ड कायम गर्छु भन्ने आशाका साथमा हो । आशावादि व्यवसायीले हरेक असफलतालाई शिक्षाको रुपमा ग्रहण गर्छ । फेरि आशावादी हुन्छ र अगाडि बढ्छ ।